Qof isku qarxiyay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho | RBC Radio
Qof isku qarxiyay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho
Posted on August 11, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Qof isku soo xirey waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyay gudaha xabsiga dhexe ee caasimadda Muqdisho,sida ay baahisay wakaaladda dowladda ee SONNA.
Bartilmaamedka is-miisaamiyahan waxaa lugu sheegay inuu doonayay sidii uu isagu qarxin lahaa taliyaha saldhigga dhexe ee Muqdisho,balse waxaa hor istaagay askari ka tirsan ciidanka ilaalada saldhigga.
Qofka is qarxiyay iyo askariga ka hor tagay ayaa dhintay,sida u xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha dalka oo intaas ku darray qaraxa inuu ka dhacay bannaanka masaajid ku yaalla saldhigga dhexe.
Docda kale,taliyaha ciidamada Asluubta Soomaaliyeed Sareeye Gaas Xuseen Xasan Cusmaan oo wakaaladda wararka ee dowladda la hadlay wuxuu sheegay inuu bad-qabo oo aysan wax khasaaro ah ka soo gaarin weerarka ismiidaminta ah.
Baaritaan la xiriira qaraxa ka dhacay saldhigga dhexe ayaa socda,lamana ogga sida ay ugu suuragashay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa inuu gudaha u galo saldhigga.